Leviticus 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Aduan afɔre (1-16)
2 “‘Sɛ obi* pɛ sɛ ɔbɔ aduan afɔre+ ma Yehowa a, ma ɔmfa esiam muhumuhu, na onhwie ngo ngu so na ɔmfa ɛhyɛ* nka ho.+ 2 Ma ɔmfa mmrɛ Aaron mma a wɔyɛ asɔfo no, na ɔsɔfo no nsaw esiam ne ngo no nsa ma, na ɛhyɛ* no de, ɔmfa ne nyinaa, na ɔnhyew wɔ afɔremuka no so na ɛno nnyina hɔ mma afɔre no nyinaa.*+ Ɛbɛyɛ afɔre huamhuam* a wɔde ogya hyew ma Yehowa. 3 Sɛ ɔbɔ aduan afɔre no wie a, aduan a ɛbɛka no nyinaa yɛ Aaron ne ne mma dea;+ ɛyɛ ade kronkron paa+ a efi afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa no mu. 4 “‘Sɛ wopɛ sɛ wotõ aduan wɔ fononoo mu de bɛbɔ afɔre a, fa ngo fɔtɔw esiam muhumuhu yɛ paanoo a mmɔkaw* nnim a ɛte sɛ kawa, anaa yɛ paanoo ntraantraa a mmɔkaw nnim na fa ngo sra ho.+ 5 “‘Sɛ wopɛ sɛ wotõ aduan wɔ apampaa so+ de bɔ afɔre a, fa esiam muhumuhu a wɔde ngo afɔtɔw a mmɔkaw nnim yɛ. 6 Bubu mu asinasin na hwie ngo gu so.+ Ɛyɛ aduan afɔre. 7 “‘Na sɛ wopɛ sɛ wokyew aduan wɔ ɔsɛn mu de bɛbɔ afɔre a, fa esiam muhumuhu ne ngo yɛ. 8 Fa aduan afɔre a wode saa nneɛma yi ayɛ no bra Yehowa anim; wɔde bɛma ɔsɔfo no na ɔde akɔ afɔremuka no ho. 9 Ma ɔsɔfo no nyi aduan afɔre no bi na ɔnhyew wɔ afɔremuka no so na ɛno nnyina hɔ mma afɔre no nyinaa.*+ Ɛbɛyɛ afɔre huamhuam* a wɔde ogya hyew ma Yehowa.+ 10 Sɛ ɔbɔ aduan afɔre no wie a, aduan a ɛbɛka no nyinaa yɛ Aaron ne ne mma dea; ɛyɛ ade kronkron paa a efi ogya afɔre a wɔbɔ ma Yehowa no mu.+ 11 “‘Mommfa aduan a mmɔkaw wom biara mmmɔ afɔre mmma Yehowa,+ na monnhyew esiam a akaw anaa ɛwo mmfa mmmɔ afɔre mma Yehowa. 12 “‘Mubetumi de abrɛ Yehowa sɛ aba a edi kan,+ nanso ɛnsɛ sɛ mohyew wɔ afɔremuka no so sɛ afɔre huamhuam.* 13 “‘Sɛ worebɔ aduan afɔre biara a, fa nkyene to mu. Nkyene na ɛkae wo Onyankopɔn apam, enti mma bi mmpa w’aduan afɔre mu. Fa nkyene ka w’afɔre nyinaa ho.+ 14 “‘Na sɛ wopɛ sɛ wode aba a edi kan brɛ Yehowa sɛ aduan afɔre a, fa hwiit* foforo a wɔde ogya atõtõ na wɔasiw bra, na ɛnyɛ aduan afɔre a efi w’aba a edi kan mu.+ 15 Fa ngo gu so na fa ɛhyɛ* ka ho. Ɛyɛ aduan afɔre. 16 Ma ɔsɔfo no mfa aduan afɔre no bi, kyerɛ sɛ, esiam ne ngo no bi, na ɔmfa ɛhyɛ* no nyinaa, na ɔnhyew wɔ afɔremuka no so na ɛno nnyina hɔ mma afɔre no nyinaa.*+ Ɛyɛ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa.
^ Anaa “ɔkra bi.”
^ Anaa “na ɛnyɛ nkae ade.”
^ Anaa “afɔre a edwudwo koma; afɔre a ahomeka wom.”